Isazi Semalt: Lesbarkeit Und Erfolg Gehen Zusammen
Kunoma imuphi umkhankaso we-intanethi, ukuhambisana nezilaleli kuyisici esiyinhloko akukho blogger engakwazi ukuyikhathalela. Ngenye yezinto ezifakazela ukuhambisana kokuqukethwe kanye nokwandisa ukufundwa kolwazi lwakho. Ngaphezu kwalokho, i-Google yamemezele ukuthi ukuhambisana kokuqukethwe kuzoba yisici esiyinhloko ku-algorithm ye-Google mayelana nokubeka. Ukufunda kokuqukethwe kwakho kungabonakala kube yinto ebalulekile yokusezingeni elibhekene ne-Search Engine Optimization (SEO). Amabhizinisi amaningi aphumelelayo anezinkampani ezihlukile ze-SEO ezisiza ukuba zihlakulele okuqukethwe komfanekiso, zichaza impumelelo yewebhusayithi ye-e-commerce. Abasebenzisi kufanele basebenzise ukuhambisana kokuqukethwe ezinhlokweni ezihlukahlukene njengokukhulisa ukufundwa kwebhulogi yakho.
Ezimweni eziningi, okuqukethwe akufundiwe uma sekude kakhulu. Eziningi zokuthunyelwe kwebhulogi okuqukethwe kufanele kube phakathi kwamagama angu-500 kuya kwangu-700 ukwenza ubungako bokuqukethwe kwekhasi eliphakathi. Lokhu ubude bungaba bukhulu kwezinye izinhlelo zokusebenza ezifana nesithombe sokubuka kweselula. Khumbula isibuyekezo se-2017 se-Google algorithm sivuza amasayithi omakhalekhukhwini. Ngamakhasi afundisayo, okuqukethwe kungadlula amagama angu-700. Noma kunjalo, okuthunyelwe okungamagama angu-1300 kumude kakhulu ukuthi umuntu afunde. Iningi labantu abahlola lewebhu bavame ukunakekelwa okuncane. Ukuzibandakanya kuwebhusayithi yakho kungadala ukulimaza ezinye imizamo yakho ye-SEO.
UJason Adler, i- Semalt iMeneja Yempumelelo Yekhasimende, unikeza ukunakekelwa ngezindlela ezilandelayo ongalungisa okuqukethwe okude:
1. Ukusebenzisa uchungechunge.
Kungaba umqondo omuhle ukuphula ulwazi kulolu chungechunge..Lezi zingabandakanya uchungechunge lwezenzakalo ngakho-ke ukugcina ukubandakanya komfundi kuphezulu. Abanye abasebenzisi bakhetha ukufaka izigaba zengeniso kanye ne-abstract. Le nsimu ingavumela umuntu ukuba aphule yonke into ibe yizigaba, lapho ingxenye yokuqala kufanele iqukathe amaphuzu aphambili ale athikili.
Ama-slideshows anikezela ngamagama omsebenzisi kumsebenzisi okwenza incazelo yezincazelo eziningi lula. Ingqondo yomuntu ingakwazi ukukhumbula izithombe ngokulula ngaphezu kokuqukethwe okubhaliwe. Ama-slideshows akha imininingwane ecacile yendlela indlela inqubo engenzeka ngayo. Ngaphezu kwalokho, imibukiso yeslayidi ingabuye itholakale ekuqukethwe kwevidiyo, lapho okufundiswa khona kanye nama-webinars angase abe lula ukuyisebenzisa.
Amavidiyo angaba umqondo omuhle wokuqukethwe. Isithombe se-motion singaba ngaphezu kwamagama ayizinkulungwane. Le ndlela ayikwazi nje ukubandakanya inani elifanele lokuqukethwe kwakho kodwa futhi yenza umfundi ahlale ekhasini lakho isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, i-Google manje ibheka amavidiyo njengokuqukethwe okujwayelekile. Amavidiyo avela enkampanini ehlukile engenza iwebhusayithi yakho ibe simo sokunyuka. Ukuthumela okuqukethwe kwevidiyo nakho kukhululekile kumawebhusayithi amaningi.
Amabhizinisi amaningi athola ubunzima uma kuziwa ekuthuthukiseni okuqukethwe kwabafundi babo. Ama-ejenti amaningi we-SEO ahlinzeka ngokuqukethwe kwawo kuma-freelance sites okungasho ukuthi impumelelo kumawebhusayithi abo. Ngaphezu kwalokho, njengoba ulwazi luqhubeka luhamba ukusuka komuntu kumuntu, ubuqotho bomgomo wakho wokumaketha buhambisana nesikhathi. Lesi sici singachaza ukwehluleka kwemikhankaso ethile ye-SEO. Lo mhlahlandlela unezici zokufunda ezingaba ngcono izinga lokuthunyelwe kwakho. Ngenxa yalokho, izethameli zakho zingazuza kule mpumelelo futhi zenze izinyathelo eziningi mayelana nokudalwa kokuqukethwe. Ungasebenzisa le mhlahlandlela ukwandisa impumelelo yomkhankaso wakho wokumaketha.